Shwe Sar – Page 536 – Shwe Sar
Author: Shwe Sar
ကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံရပြီး လူမသိသူမသိ သေသွားခဲ့ရတဲ့ သနားစရာ အဖွား
By Shwe SarPosted on October 14, 2020
ရန်ကင်း၊၂()ရပ်ကွက်၊တိုက်()ွတင်နေထိုင်သောအသက် (၇၇)နှစ်အရွယ်အန်တီကြီးကိုနေ့လည်၁၃:၁၀မိနစ်ကတည်းကဖုံးဖြင့်အကြိမ်ကြိမ်ဆက်သွယ်သော်လည်းမကိုင်ပါ။ ညနေ ၁၆း၃၀ အချိန်ကြမှအန်တီ၏သမီးဖြစ်သူရောက်ရှိလာပြီးအိမ်တခါးဖွင့်ကြည့်တော့မှဧည့်ခန်းထဲရှိထိုင်ခုံတွင်ခေါင်းတင်ပြီးသေဆုံးနေကြောင်းတွေ့ရှိရသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာရပ် အုပ်၊မိုးစေ တနာ အ သင်းနှင့်ရဲစခန်းတို့ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ရပါသည်။ ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေသောကာလကြီးတွင်အိမ်ထဲတွင်တစ်ဦးတည်းနေထိုင်ကြသောအသက်ကြီးအဖိုးနဲ့အဖွားတို့ရဲ့အခြေအနေမှာအပြင်လူမသိရှိနိူင်သည့်အတွက်ကူညီကယ်တင်ရန်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးကြပါသည်။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့်မိဘနဲ့ဝေးနေတဲ့အချိန်မှာပစ်မထားကြပါနဲ့။ဖုံးဖြင့်အမြဲဆက်သွယ်ကြစေလိုကြောင်းဒီအဖြစ်လေးကိုကြည့်ပြီးအကြံပြုတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ Source Ko Lwin unicode ရနျကငျး၊၂()ရပျကှကျ၊တိုကျ()ှတငျနထေိုငျသောအသကျ (၇၇)နှဈအရှယျအနျတီကွီးကိုနလေ့ညျ၁၃:၁၀မိနဈကတညျးကဖုံးဖွငျ့အကွိမျကွိမျဆကျသှယျသျောလညျးမကိုငျပါ။ ညနေ ၁၆း၃၀ […]
အမိုက်စားဖက်ရှင်လေးနဲ့ စမတ်ကျ လွန်းနေတဲ့ ပုံလေးတွေတင်ပေးလာတဲ့ နန်းခင်ဇေယျာ
မော်ဒယ်လောကမှ တစ်ဆင့် သရုပ်ဆောင်ဘက်ကို ကူးပြောင်းလာခဲ့သူကတော့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး နန်းခင်ဇေယျာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ဖြူစင်လွန်းတဲ့ စိတ်ထားေ လြးေ ကာင့်လည်း ပရိသတ်တွေအားလုံးက ချစ်မဝ ဖြစ်နေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နန်းခင်ဇေယျာဟာ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားများတွင်လည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး […]
no bra day မှာ bra မပါတဲ့ အမိုက်စား ပုံလေးတင်ပေးလာတဲ့ သဇင်ဦး
ညို့အားပြင်းတဲ့ အလှတရားတွေနဲ့ ပုရိသတွေကိုရင်ခုန်သံတွေမြန်အောင် ဖမ်းစားလိုက်ပြန်တဲ့သဇင်ဦး သွယ် လျတဲ့ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဆက်ဆီသဇင်ဦးကိုသိကြမယ် ထင်ပါ တယ်။ဆွဲမက် ဖွယ်ရင်သပ်ရှုမောစရာ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ပုရိသတွေရဲ့ရင်ကို ဆွဲဆောင်ညို့ယူထားတဲ့ အလန်းစား မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ သွယ်လျ ပြေပြစ်တဲ့ ခန […]
ကိုဗစ် ဖြစ်ဖူးတဲ့ သူ ဟာ ပြန်ဖြစ်နိုင်သလား? ဒါလည်း အတော်များများ က မေးကြတဲ့ ကိစ္စပါ။
“အချို့မှာပြန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်” အသေး စိတ်ရှင်းပြသွားပါ့မယ်။ အဲ့ဒီ ကိုဗစ်ဖြစ်ခဲ့သူဟာ.. (၁) ရောဂါပြင်း ပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ခဲ့သူ (moderate and severe) သမားလား? (၂) ရောဂါမပြင်းထန်သူ (mild) နဲ့ ရောဂါလက္ခဏာလုံးဝမပြခဲ့သူ (as ym pt […]
ရင်သားအလှလေးပေါ်လွင်အောင် ဘရာလေး ဆွဲချပြီး က ပြထား တဲ့ ချိုဇင်ဝင်းပြည့် ရဲ့ အမိုက်စားဗီဒီယို
သွယ်လျတဲ့ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဆက်ဆီ မော်ဒယ်လ် ချိုဇင်ဝင်းပြည့် ကိုသိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ဆွဲမက်ဖွယ်ရင်သပ်ရှုမောစရာ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ပုရိသေ တွ ရဲ့ရ င်ကို ဆွဲဆောင်ညို့ယူထားတဲ့ အလန်းစား မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။သွယ်လျ ပြေပြစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူ လှပကြည်လင်တဲ့ အသားအရေကိုပါ […]
မိမိုက်လွန်းတဲ့ ဖက်ရှင်လေးနဲ့ အတွင်းသားတွေ ပေါ်လွင်အောင် မိလွန်းနေတဲ့ ဆွေဇင်ထက်
မင်္ဂလာပါပရိတ်သတ်ကြီးရေ Miss Universe Myanmar အလှမယ် ဆွေဇင်ထက် ကတော့ အဆိုတော်ဂေးဂေး နဲ့ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ relationship တစ်ခုကို တည်ဆော က် ထား သူဖြစ်ပြီး ပရိတ်သတ်တွေအားကျနေတဲ့ အတွဲလေးဖြစ်ပါတယ် ။ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ချစ်သူဘဝနဲ့ […]
ကိုဗစ် လူနာတွေ နဲ့ (၁၄) ရက်တိတိ တခန်း ထဲ အတူနေရပေမယ့် ကိုဗစ် လုံးဝ မကူးစက်ခဲ့တဲ့ လူသား (ကမ္ဘာ့စံချိန်ပါ တင်လောက်ပါတယ်)
By Shwe SarPosted on October 14, 2020 October 14, 2020
ကိုဗစ်ကာလ မှာ ကမ္ဘာ့စံချိန်တင် လောက်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက လူသားတဦး ပေါ်ထွက်လာပါပြီ။ သူ့ကြည့်ရတာ မြွေဆိပ်ပြီးသလို ကိုဗစ်ကို ပြီးနေတဲ့ ပုံစံမျိုး၊ ကူးစက်လူနာတွေနဲ့ တခန်းထဲ ၁၄ ရက်တိတိ နေခဲ့တယ်ဆိုတော့ တကွေမဟုတ် တကွေ့ကေ တာ့ […]
ညို့အားပြင်းတဲ့ အလှတရားတွေနဲ့ ပုရိသတွေကိုရင်ခုန်သံတွေမြန်အောင် ဖမ်းစားလိုက်ပြန်တဲ့ ချိုဇင်ဝင်းပြည့်
သွယ်လျတဲ့ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဆက်ဆီ မော်ဒယ်လ် ချိုဇင်ဝင်းပြည့် ကိုသိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ဆွဲမက်ဖွယ်ရင်သပ်ရှုမောစရာ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ပုရိသေ တွ ရဲ့ ရင်ကို ဆွဲဆောင်ညို့ယူထား တဲ့ အလန်းစား မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။သွယ်လျ ပြေပြစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူ […]
မသိ၊ မမြင်နိုင်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ နဲ့ နှစ်ယောက်လုံး Positive ဖြစ်လို့ ဝမ်းသာ မိတဲ့ အဖြစ်အပျက်
စင်တာတစ်ခုလုံးငြိမ်သက်ပြီးကျစ်ရစ်ခဲ့တယ် ။ အခုအချိန်အထိမနားရသေးတာက Volunteer တွေနဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပဲ။ မျက်နှာတွေလည်းမကောင်းကြဘူး ကျူဝင်သူရာနဲ့ချီပြီး Po si tive တွေ့လို့စိတ်ထဲမကောင်းဘူးလို့ပြော တယ် ။ ဒီညတော့သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးရင် မနက်ဖြန်ညနေအထိ သူတို့တွေခဏလေးနားပါမယ် ။ နားနေတဲ့အထိ နောက် […]
သူမ ရဲ့ အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းအလှ ကို ပြသလိုက်တဲ့ နန်းမွေစံ ရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယို
မော်ဒယ်လ် နန်းမွေစံ ကတော့ လက်ရှိမှာ အောင်ြ မင် လျက်ရှိနေတဲ့ မော်ဒ ယ်လ်တွေထဲမှာ တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်လျက်ရှိနေကာ ကြော်ြ ငာတွေ ကိုလ ည်း ရိုက်ကူးလျက်ရှိနေ သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမိုက်စားဖက်ရှင်လေးတွေကို […]